नेपालकै पहिलो ‘नेटवर्क आर्क’ पुल असोजसम्म बनिसक्ने | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
भदौ ५, २०७५ मंगलबार ८:३२:३ | बेदानन्द जाेशी
काठमाडौं – काठमाडौंको बिजुली बजारको धोबीखोला र तीनकुनेको बागमती नदीमाथि आकर्षक पुल बनाउने काम भैरहेको छ ।
नेपालमै पहिलोपटक नेटवर्क आर्क प्रविधिबाट निर्माण गर्न लागिएको पुलले गाडी सञ्चालन सहज बनाउनुको साथै शहरको सौन्दर्यता पनि बढाउने काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता ई. विश्व विजयलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
माइतीघर मण्डलादेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्मको आठ लेनको सडकमा धोबीखोला र बागमती नदीमाथि चार लेनकै पुल भएपछि नयाँ पुल बनाउन लागिएको हो । माइतीघर–तीनकुने सडकखण्डलाई आठ लेनसहितको आकर्षक नमूना सडक बनाउने उद्येश्यअनुुरुप ‘नेटवर्क आर्क ब्रिज’ निर्माण गर्न लागिएको योजना प्रमुख दिपक केसीले जानकारी दिनुभयो ।
वि.सं. २०७१ साल पुषमा सुरु गरेर २०७४ पुसमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी योजना रहेपनि अहिलेसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । सुरुवातीका डेढ वर्ष डिजाइन बनाउनमा नै लागेको र त्यसपछिका दुई वर्ष ढल, पानी, पोल आदि व्यवस्थापनमा खर्च भएका कारण गएको फागुनदेखि मात्र काम सुरु गरिएको योजनाका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । यी पुलको डिजाइन बंगालादेशको निर्माण कम्पनी डीपीएनबाट परीक्षण गराइएको हो ।
नेपालमा यस्तो पुल पहिलो भएकाले यहाँ अनुभवी कन्सल्टेन्ट नहुँदा बंगलादेशबाट गराउनुपरेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । धोबीखोलामा ५१ मिटर लम्बाई र १२ मिटर चौडाई गरी दुईवटा र बागमती नदीमा ८५ मिटर लम्बाई र १२ मिटर चौडाईका दुईवटा गरी चारवटा यस्ता पुल बन्दैछन् ।
१३ करोड १४ लाखको ठेक्का सम्झौतामा बागमतीमाथिको आर्क पुल निर्माणको जिम्मा पप्पु कन्ष्ट्रक्सनलाई र २१ करोडको ठेक्का सम्झौतामा धोबीखोलामाथि बनिरहेको आर्क पुलको निर्माण जिम्मा जई कन्ष्ट्रक्सनलाई दिइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अहिले धोबीखोलामाथि एकातर्फ मात्र आर्क ब्रिज बनिरहेको छ । यो पुलको निर्माणकार्य ४५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र आउँदो असोजसम्म सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ । तर अर्कोतर्फ भने जग्गामा केही विवाद देखिएकाले अहिले निर्माण कार्य सुरु नगरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यस्तै बागमती खोलामाथिको आर्क पुल निर्माणको काम भनसुरु गर्न अझै केही समय लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
र नेटवर्क आर्क ब्रिजमा पुलको भार बहन गर्नका लागि आर्क र पुलको बिमलाई फलामे ह्याङगरहरुको नेटवर्कले जोडिन्छ । यसले गाडीको भारलाई एउटै ठाउँमा सीमित नगरी चारैतिर फैलाएर राख्ने हुदा बढी भार क्षमता पनि थेग्न सक्ने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसार यी पुलहरुलाई नेटवर्क आर्क ब्रिज भनिएता पनि अरसीसी, प्रि—स्ट्रेस र आर्क तीनवटै प्रविधि प्रयोग गरिएको हुन्छ । जसअनुसार पुलको पूर्ण भार बिम, केबल वायर र आर्कले संयुक्तरुपमा बहन गर्दछ । अन्य पुलमा जस्तो पिल्लरलाई नदीको पानीको बहाबले हल्लाएर पुल भत्किने डर यस्तो पुलमा रहँदैन ।
अहिले भित्र्याइएको आर्क प्रविधिमा चाहिँ बीचमा पिल्लर राख्नुपर्दैन । ‘यो ब्रिज नेपालकै पहिलो नेटवर्क आर्क ब्रिज हो’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यस्तै पुल मुग्लिनमा बनिरहेको छ, तर त्यो पुल नेटवर्क आर्क नभई आर्क मात्र हो । त्यस पुललाई फलामको नेटवर्कले यसरी झुण्ड्याइएको हँुदैन ।’